Xikmad waayeel iyo Xammaasad dhallinyaro. W/Q: Xasan Cabdulle Calasoow “Shiribmaal” | Laashin iyo Hal-abuur
Soomaaliyeey is maqalaa
Ijaabadu ku sugan tahay
intaad wada jirtaanaa
Udubkiinnu ku mudan yahay.
Is kaashigu ku wacanyahay
Cabdulle Raage (Taraawiil)
Xikmad, hadal, maslaxo iyo maan waayeel haddaan ku socon laheyn heeryo naguma dul habsateene. Laba qodob ayaan u kala qaadi doonaa qormadeeydan xikmad waayeel iyo xamaasad dhallinyaro!’
Qodob ku saabsan waayeelka
Qodob ku saabsan xamaasadda dhallinyarada.
Hadal waayeel haddii la yeeli lahaa hal waraabe ma cuneen, waa mahmaah Soomaaliyeed oo facweyn sidaa awgeed waayeelku Xikmad ahaan iyo garaad ahaan-ba ma jiraan wax loo dhigo, maxaa yeelay waaya badan ayuu usoo joogay hab nololeedka wadciga, waayaha, wareerka, wanaagga iyo waqtiga san! sida aan mahmaahda ba ka garan karno xikmadda ama hadalka waayeelku waa meesha kaliya ee ku habboon in turxaanbixinta tusmeynta, tarbiyada, toosnaanta iyo talada ba laga qaato, loo na noqdo haddii lasy maandhaafo, waa na waddada kaliya ee hagta Xamaasada dhallinyarada iyo guud ahaan waaqica ummadeed!
Wanaag kama dhexdhaco reer haddaan,Ururin waayeele,
Iyadoo is wada wayday baa, Wiida loo ridiye
Isma waafaqaan wiil yar iyo, Waalidkii dhalaye
Waayahay haddaan lays lahayn waa, Wax kuma taale.
Ma hubo inuu jiro Suugaanyahan iyo Aftahan aan wax ka dhihin, oran xikmadda iyo hufnaanta waayeelka. Sida ku cad tuducyadaan gabayga ah haddaan reerka waayeelku u hagin waayahooda nololeed ama u aruurin dhinaca toosan ku na hoggaamin halloodka suubban ma dhacdo inay asaagood tiigsadaan, gaaraan. Ha ahaadaan Qoys, qolo, Qabiil, ama Qaran dhan oo wada jira.
Mahmaah kale ayaa dhaheysa “Hadal waayeel waa guudmar” Maahmaahdu waa hadal murtiyeed inta badan ka hadasha waayo aragnimo ama dhacdo qof soo martay ka dibna uu ka reebo erayo xikmadaysan oo cabbiraya dhacdadiisa saamayna ku leh nolol maalmeedka bulsho waynta uu af ahaan iyo dhaqan ahaan ba ka tirsan yahay. Hadda ba waayeelku waxay ku jirtaan dadka aad loogu tilmaamo inay leeyihiin Aragti Suubban oo u suurto galisay inay reebi karaan Murti, iyo oraahyo nuxur leh oo xambaarsan macna xeel dheer, jiri-na karta inta ay jiraan dad isticmaala luuqdooda!.
Haddaba waayeelku waa kuma? Waayeel waa aniga iyo adiga annaga iyo innaga oon is yeel-yeelayn ayaa la yiriye, waayeel wuxuu yahay qof waliba waa ogyahay maxaa yeelay waa kala garan karnaa waxa saxan iyo waxa khaladan. laakiin waxa loo bareeraa xumaan ka talinta, waa na tan uu ka dardaarmayo waayeelka ugu weyn reerka si guud iyo si gaara ba waayeelku waa kan aragtiga togan ku cabbira guud ahaan golaha loo dhanyahay ee umnadeed!
Waayeelku waa ka fiira iyo fahma dheeryahay waa na ka ildheergaradsanyahay waa na ka welwel badanyahay guud ahaan dadka intiisa kale sida aan heestaan ka baran karno!
Ninka ugu ildheerbaa
Dadka ugu ayaan daran
Waxaan lala arkeynbaa
Asiga uun muuqda”
Waayeelku wuxuu dareemayaa wax aan u muuqan bulshada qeybeheeda kala gedisan; hadda ba Xikmadda waayeelku ma ahan wax lagu soo koobi karo hal Qodob iyo hal Qormo sidaa aawgeed tusaale noogu filan intaan kasoo taataabannay!
DhaLlinyaraya waayeel dad ways, Wada dhex joogyaahe
Ma dhammaato xaajadu haddaan, Dhinac la saareyne
Haddii dhoonta kii rari lahaa, Dheelli ka ilaalsho
Oo dhaanka kii fuli lahaa, Dhabbi san qaadsiiyo
Dhacda waliba werinteed hadii, Laga dhabeeynaayo
Dhibku naguma gaareen halkeey, Dhabaqday dhowr jeere
DhalLinyaradu waa tiir dhexaad, Dheeman iyo luule
Uga udug dhir iyo foox dadkiyo, Waalidkii dhalaye
Waa dhumuc haddii dhaawac galo, Qaran dhantaalmaaye
Waayeel ma dhiibteen-ba talo haddaan, Ciddi ka dhuuxeyne
Dhallinyarada dheef weeye guud, Lagu na dhaataaye
Dhaqsa muuga gudubnaa dhibkaan nalanku dheereeyay?
Xasan Kaamil Cuute (Shiribmaal)
Dhallinyarado waa laf dhabarta bulshada iyo awoodda jiritaan ummadeed sida aan ognahay, annagu haddaan Soomaali nahay waxaa lagu qiyaasaa dhallinyartayna boqolkii ba Toddobaatan, 70%) waa Afar u qeyb bulshadeenna Seddex qeyb oo wax yar la’ haddaba awoodda intaa la’eg haddaan looga faa’iideysan dhanka xagasha quman aannaan la helin garraad waayeel oo haga maxaad u maleyn?
Waxaa la yiri: “Labaatan jir intuu geed ka boodu ayuu talo ka boodaa” Sida aan ka fahmeyno mahmaahdaan faca weyn waxay tilmaame dhallinyarado inay leedahay xoog iyo orod macnaha awood laakin haddii aan tala hufan lagu kaabin aan hillinka toosan ku taagsaneyn oo dhinac maraya waa meesha laga yiri: “Markaan tabar haayay talo maheyn. Haddaanoon tala haayana tabar mahaayo” xamaasadda dhalinyaranimadu waa waaya ku soo mara iyo wacaal awoodeed laakin aan umaddeynu uga macaashin sidii ku habbooneyd!
Mahmaah kale ayaa dhaheysa: “Dhib soo socda nin dhagxeeyay iyo nin u dhoola cadeeyay, midna ma dhaafyo” Maadaama la isu baahanyahay la is na kaabayo labada dhinac ee dhallinyaro, iyo waayeel: haddii aan Xikmadddii iyo xistii waayeelka iyo xooggii iyo xamaasaddii Dhallinyarada la isku kabin meeshaas waxa ka dhalanaya bulsho kala haadsan sida tunno annagoon dhihin waa kuma? Maxuu noo wadaa? Maxaa ku hoos duugan? ma nagu daneeysaa mase waa noo danaynayaa? Ratiga manoo raraa mase asaa kaligiis raranaya? Ma qowsaar qaydinka noo qaban karaayabaaa?” Ma ahan inaan markasto aan ahaanno xoolaha oo kale ee la iska hoggaansado, Siyaasi ku sheegu na ahaado “Shilin”
Shilin, waxaa la yiraa cayayaan Xoolaha dhiigga ka jaqa markuu ka dharga na ka dhaca asoo waliba dhaawac weyn u geysta jirkooda iyo muuqaalkooda ba. mahmaah ayaa dheheysa. “Nacasku harraad ayuu dareemaa.” Macnuhu waxa waaye qofka caqliga iyo garashada u saaxiibka ahi, mar na sacabbadiisa ayuu biyaha uga dhergaa, mar na wuxuu keyd u dhigtaa marka la waayo. Laakiin, ma daawado qul-qulka halalacda iyo haraha rogrogmanaya xiliga barwaaqadda ah ee waa usii diyaar garoobaa berita na ma welwelo. Illeyn waa hubaal in aad mar uun rafaad la kulmi doontid’e!
Ugama jeedo in dhallinyaradu nacasiin yihiin laakin waxaan uga socdaa aan xamaasaddeenna xeerino. Macnaha ka dhigno mid joogto ah ee aan aheyn mid isbuucle ah ama laab lakac uun, waxaan ku soo afxirayaa qormadaan aan labadaa qodob ee muhiimka ah uga soo hadlay ee xikmad waayeel iyo xamaasad dhalinyaro Maasadaan:
Xikmadihii ku jiri jiray
Xeerar lagu lifaaqaya
Xamaasada is diidaya
Xiisa gaara mey jirin
Xummaantaa la tiri jirey
Xanaftaa la bi’in jiray
Xilbaa leysku geyn jiray
Xeerba nalagu dhiqi jiray
Xaqiraad-na may jirin!
Xoolaa layska dhici jiray
Xinjir-baa la qubi jiray
Xandhaa layska xadi jiray
Xisaaba la tirin jiray.
Xili baa na soo maray
Xarkihii la wada jaray
Xaydaabka laga baxay
Xisaab li’ina ay timid
Cid-na xanafta dhawreyn
Xilkasnimada laga tegay
Xukun lagu dhaqmaa jirin.
Xeyn meel ku qaraxdiyo
Xabbad la isku rida iyo
Xasillooni iyo nabad
Marbaa xeebta loo direy
Xili waxaa na soo maray
Xisbi nagu dangaariyo
Xuurta laysku haystoo
Dadku xero ku oodnaa.
Dhallintu xis gaabiyo
Xaaba lagu metelaayo
Xaasid aan la garaneyn
Xabsi lacag ku gala iyo
Xeera qaad ka buuxiyo
Xamakoow na dila iyo
Xil ma gude na daashaday.
Xaaraan ku naax iyo
Xaqaad been ku jerisiyo
Nin-la xulay nimuu xulay
Iyo nimanoow sii xulay
Xeer lagu dabaqa iyo
Soow xaalki nama geyn?
Haddii xanafta laga jiro
Xis waayeel-na lagu kabo
Xoog waaye dihanoo
Xamar iyo Baraawiyo
Xigtada Raas caseyr iyo
Xarardheere iyo Hawd
Xeebaha badda casiyo
Xeendaabka guud iyo
Xaafad iyo magaaliyo
Xeryahaa miyiga iyo
Xag kastoon ku noolnahay
Iyagaa xureyn kara!